မြန်မာပြည်အတွင်း | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူ‌ရေးအလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
မြန်မာပြည်အတွင်း ရှိ မှ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူ‌ရေးအလုပ်အကိုင်များ
Job Summary One position for Chief Engineer is open at our company! If you are confident about your expertise in mechanical and electrical functions and you have strong leadership skills and are knowledgeable about ISO and Food Safety as well as refrigeration system, we WANT you!
Job Summary One position for Chief Engineer is open at our company! If you are confident about ...